Vaovao - mavitrika indostrialy - E-varotra, maodely fampandrosoana ny varotra vaovao
Tamin'ny 22 Janoary, ny Minisitry ny Minisiteran'ny varotra dia niresaka momba ny fivoaran'ny tsenan'ny antsinjarany amin'ny taona 2020, tamin'ny filazany fa tamin'ny taon-dasa, ny fampiroboroboana ny tsenan'ny antsinjarany an-tserasera dia nampiseho fironana tsara, ary ny haben'ny tsena dia nahatratra avaratry vaovao iray manontolo haavo. Tao anatin'ny herintaona taona 2020, ireto no asongadin'ny tsena fivarotana antsinjarany sinoa: ny fanovana ny maodely taloha ho lasa vaovao dia nohamafisina, ary ny fiakaran'ny vidim-piainana dia tsy mihena; Ny e-varotra miampita sisintany dia manohy mampiroborobo ny fampandrosoana ny varotra iraisam-pirenena; Nohavaozina ny varotra e-varotra ambanivohitra ary nampitomboina ny fampandrosoana ny e-varotra ambanivohitra.
Notaterina fa tamin'ny taona 2020, ny sehatry ny e-varotra fanaraha-maso goavambe China dia nahangona varotra mivantana maherin'ny 24 tapitrisa, ny varotra fanabeazana an-tserasera dia nitombo mihoatra ny 140% raha oharina tamin'ny taon-dasa, ary ny fakan-kevitra momba ny marary amin'ny Internet dia nitombo 73,4% tamin'ny taona lasa. taona. Ankoatr'izay, ny hetsika fampiroboroboana fiantsenana an-tserasera marobe toa ny "Double Shopping Festival", "618 ″," Double 11 ″ ary ny "Festival Spring Shopping Festival amin'ny lohataona an-tserasera" dia nampiroborobo ny famoahana ny fangatahana ary nanamafy ny fitomboan'ny tsena . Ny fanjifana ny maitso, salama, "seho an-trano" ary ny "toekarena an-trano" dia nanjary nalaza kokoa, ary ny fitomboan'ny fitaovam-panatanjahan-tena, ny sakafo mahasalama, ny famonoana otrikaretina sy ny fanadiovana, ny lakozia antonony sy avo ary kojakoja biby fiompy 30%.
Raha ny antontan'isa momba ny fadin-tseranana dia mahatratra 1,69 trillion RMB amin'ny taona 2020 ny fampidiran-ketra sy ny fanondranana e-commerce cross-border izay fisondrotana 31,1%. Nihalalina ny fiaraha-miasa amin'i Shina amin'ireo firenena 22 amin'ny e-varotra Silk Road, ary nihombo ny fampiharana ny valim-pifandraisana roa tonta. 46 ny faritra fanandramana e-varotra vaovao miampita sisintany vaovao nampiana, ary nampiana modely varotra “9710 ″ sy“ 9810 ”e-varotra B2B miampita sisintany hanamorana ny fahazoan-dàlana.
Mikasika ny varotra e-varotra ambanivohitra dia nahatratra 1,79 trillion yuan ny varotra antsinjarany ambanivohitra tamin'ny taona 2020, tafakatra 8,9% isan-taona. Ny e-varotra dia nanafaingana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fivelarana nomerika hahafahan'ny fambolena, ary ny andiana vokatra fambolena mifanaraka amin'ny tsenan'ny e-varotra dia manohy mivarotra tsara, manome tosika lehibe ny famelomana indray ny tontolo ambanivohitra sy ny fanalefahana ny fahantrana. Raha ny angom-baovao navoakan'ny National Bureau of Statistics, ny varotra antsinjarany an-tserasera amin'ny taona 2020 dia hahatratra 11,76 trillion yuan, ny 10,9% isan-taona, ary ny fivarotana antsinjarany entana an-tserasera dia hahatratra 9,76 trillion yuan, ny 14,8% isan-taona , kaonty efa ho ny ampahefatry ny totalin'ny varotra antsinjarany ny entan'ny mpanjifa.
Mampiseho ny angon-drakitra fa ny antsinjarany amin'ny Internet dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fanjifana, fampiorenana ny varotra ivelany, fanitarana asa ary fiantohana ny fiveloman'ny olona, ​​manome anjara biriky vaovao amin'ny lamin'ny fampandrosoana vaovao izay ny tsingerina anatiny no rafitra lehibe indrindra ary ny tsingerina anatiny sy iraisam-pirenena dia mifampahery.